Global Voices teny Malagasy » Bilaogy Vaovao Ifarimbonana, Feo Shiliana Vaovao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Oktobra 2017 13:59 GMT 1	 · Mpanoratra Rosario Lizana Nandika Miranah
Teraka tamin'ny herinandro lasa teo tany avaratry ny tanànan'i Arica  ny bilaogy vaovao ifarimbonana voalohany ao Shily, “El Morrocotudo ”. Efa nahasarika fisoratana anarana 200 avy amin'ny faritra rehetra any Shily ny bilaogy natsangana vao haingana. Ny lohahevitra mahaliana ifantohana dia mikasika ny olana ao an-toerana ao Arica sy ao amin'ny firenena Shiliana ary koa ny olana iraisam-pirenena.
Mpianatr'ilay Senatera Fernando Flores , izay nampiroborobo tamim-pivitrihana ny bilaogy ho ampahany amin'ny fampianarany ao amin'ny Anjerimanontolon'i Tarapacá  no nampiroborobo ity tetikasa ity. Anisan'ny mpianatra ao amin'ny Foiben'ny Mpanombo-Draharaha vaovao ao amin'ity oniversite ity, izay naorina tamin'ny taona 2001 ny sasany amin'ireo mpianatra.
Etsy andaniny, saika ny 90%n'ny tsenan'ny gazety no an'ireo orinasa roa lehibe: Copesa  (mpamoaka ny “La tercera”, “La Hora”, “La Cuarta”, “Siete mas siete”) sy ny El Mercurio  ( miaraka amin'ny “El Mercurio”, “Las Ultimas Noticias” sy ny “La Segunda”). Izany toe-draharaha izany no nandrisika ireo vondrona mpanao gazety mavitrika nanangana bilaogy  mba hiresaka ireo lohahevitra tsy tian'ny media efa misy havoaka.
Amin'izao fotoana izao, manana ny rafitra RSS azy manokana ao amin'ny votoatin-dahatsorany - ho an'ny gazetiboky momba ny tanora, “Zona de Contacto ” ny tsenan'ny gazety, El Mercurio. Avy any Copesa, misy ireo bilaogy hanaovana fizarana ara-panatanjahantena ao amin'ny “La Tercera ” sy ny gazety be mpividy indrindra “La Cuarta ”, na izany aza, tsy misy ny olana lehibe.
Blaogy vaovao iray hafa, “Lanalhue Noticias ”, notontosain'ny olona liana tao an-toerana no niseho vao haingana tany Cañete, tanàna kely iray maherin'ny 2 000 maily atsimon'i Arica; na dia tsy mitovy amin'ny “El Morrocotudo” aza, afaka maneho hevitra fotsiny amin'ny lahatsoratra, fa tsy mandefa lahatsoratra ny vahoaka.
Natsangana ny bilaogy vaovao Shiliana avy eny ifotony “El Morrocotudo ” sy ny “Lanalhue Noticias” mba hanolotra vaovao amin'ny fomba fandraisana anjara samihafa ary hanome safidy hafa ahafahan'ny olon-tsotra mandray anjara amin'ny adihevitra momba ny olan'ny firenena.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/10/29/109351/
 El Morrocotudo: http://www.elmorrocotudo.cl/admin/render/portada/
 Fernando Flores: http://www.fernandoflores.cl/
 Anjerimanontolon'i Tarapacá: http://www.uta.cl/
 Nanakatona ny bilaoginy : http://www.lun.com/ediciones_anteriores/detalle/noticia.asp?idnoticia=C386468831291898&dia=22&mes=10&anno=2005
 tsenan'ny gazety : http://www.anp.cl/p4_anp/site/artic/20041028/asocfile/ASOCFILE120041028143040.pdf
 El Mercurio: http://www.emol.com/
 nanangana bilaogy: http://prensanegra.blogspot.com/
 votoatin-dahatsorany : http://editorial.elmercurio.com/index.asp
 Zona de Contacto: http://www.zona.cl/
 La Tercera: http://blogs.latercera.cl/deportes/
 La Cuarta: http://blog.lacuarta.cl/
 Lanalhue Noticias: http://ln.fica.cl/portada_lanalhuenoticias.php